Usain Bolt oo loo diyaariyay kabihii uu ku ciyaari lahaa kubbada cagta marka uu oradada ka fariisto – Gool FM
Usain Bolt oo loo diyaariyay kabihii uu ku ciyaari lahaa kubbada cagta marka uu oradada ka fariisto
(Dortmund) 15 Nof 2016 – Ninka ugu dheereeya Adduunka Bolt, kaasoo sagaalka jeer ku guuleystay biladda dahabka ee Olympicada adduunka ayaa si cad u sheegay inuu ku fikirayo in marka uu oradada ka fariisto isku badelo laacib kubbada cagta ah.
Blot oo haysta rikoodhka adduunka ee orodka 100-ka mitir iyo midka 200 ayaa markiisii ugu dambeeysay xagaaga soo socda ku tartami doona World Championships ee ka dhacaya magaalada London, kaddibna waxa uu u jihaysan doonaa dhanka ciyaarista kubadda cagta.
Dhinaca kale kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ee dalka Jarmalka ayaa xaqiijisay in ninka ugu dheereeya adduunka ee Usain Bolt uu tababarka la sameyn doono mustaqablka dhow, kaasoo uu isugu diyaarinayo waayihiisa kubadda cagta.
Haddaba shirkadda samaysa qalabka ciyaaraha ee Puma taasoo maal gelisa kooxda reer Jarmal iyo Usain Bolt qudhiisa ayaa soo bandhigtay kabo qurux badan oo ay u diyaarisay.
Puma ayaa barteeda Twitter-ka soo dhigtay kabo qeyb caddaan ka ah qeybta kalena Oronje ka ah, isla maarkaana uu dusha uga dheggan yahay calanka Jamaica oo uu xiddigan Usain Bolt ka soo jeedo iyo magaca “Bolt”.
Waxaana ay soo raacisay Puma qoraal u dhignaa: “Kabahaaga waa diyaar, Usain Bolt”.
XANTA SUUQA: Daniel Sturridge oo lagu wado inuu ka tago kooxda Liverpool
HOR DHAC: Italy Vs. Germany